Indwangu yendwangu engacimi umlilo - Abakhiqizi bendwangu baseChina Abangenacala
Indwangu yefayibha ye-Ceramic yenziwe nge-fiber ceramic kanye nenani elithile le-fiber organic, ehlanganiswe ngengilazi yefayibha (insimbi yensimbi), yaphothwa yenziwa ngentambo, yase ilukelwa ibe yindwangu.
Ukusetshenziswa Main intuthu kwesihenqo odongeni indwangu:
a. Ukufakwa kukagesi: indwangu yamakhethini entuthu yentuthu inebanga eliphakeme lokufakwa kukagesi, lingamelana nomthwalo wamandla aphezulu, futhi lingenziwa indwangu yokuvikela, umkhono neminye imikhiqizo.
b. isinxephezeli okungeyona eyensimbi: indwangu yenjoloba yesiliconi ingasetshenziswa njengedivayisi yokuxhuma eguquguqukayo yamapayipi. Ingakwazi ukuxazulula umonakalo obangelwe ukwanda okushisayo nokuncipha okubandayo, futhi indwangu engabicah inokumelana nokushisa okuphezulu, anti-corrosion, anti-aging performance, flexibility and flexibility. Ingasetshenziswa kabanzi ku-petroleum, embonini yamakhemikhali, kusimende, emthonjeni wamandla nakweminye imikhakha.
Lo mkhiqizo kulula ukuwuthwala, ukumiswa okulula, ungasetshenziswa ngokushesha, futhi kungukuvikelwa kwemvelo okuluhlaza okotshani, kungukukhetha ukuvimbela umlilo, ukucisha umlilo nokuphatha okuphuthumayo. "Kungcono ukuthi ungalokothi uyisebenzise kunokungabi nayo isikhashana.".
Iseyili engenamlilo yenziwa ngendwangu yokushisa ephezulu engamelana nokushisa, yokulwa nokugqwala namandla amakhulu, eklanyelwe noma efakwe ngensimbi yenjoloba abicah. Kungumkhiqizo omusha ohlanganisiwe onokusebenza okuphezulu nezinhloso eziningi.
Indwangu engangenamlilo ne-Silicone Tape
Indwangu engangenamlilo yenziwe nge-fiber engacishi umlilo nengashisi, esetshenzwe ngenqubo ekhethekile. Izici eziyinhloko: okungashisi, ukumelana nokushisa okuphezulu (ama-550-1100 degrees), isakhiwo esihlanganisiwe, akukho ukucasuka, ukuthungwa okuthambile nokuqinile, okulula ukusonga izinto nemishini engalingani. Indwangu engashi umlilo ingavikela izinto ezindaweni ezishisayo nasezindaweni ezinhlansi, futhi ivimbele noma ihlukanise ngokuphelele umlilo.
Indwangu engashi umlilo ilungele ukushisela kanye nezinye izikhathi ezinenhlansi futhi kulula ukudala umlilo. Ingamelana nezinhlansi, i-slag, i-welding spatter, njll. Ingahlukanisa indawo yokusebenza, ihlukanise isendlalelo sokusebenza, futhi isuse ingozi yomlilo engadalwa emsebenzini wokushisela. Ingasetshenziselwa ukwahlukanisa okulula, futhi isungule indawo yokusebenza ephephile, ehlanzekile nejwayelekile.